रोमांटिक, सतर्क, ध्यान, अचम्म, संवेदनशील र कामुक, एक स्रोक मन र व्यावहारिकता को नजिकै - यो राशि चक्र क्यान्सर को संकेत हो। यस हस्ताक्षर अन्तर्गत जन्मेको मानिसले आफ्नो नम्रताको साथ अदालतको चरणमा जित्छिन्, र विवाहमा उनीहरूको भक्ति र वफादारीको साथमा आश्चर्य छ। यी मानिसहरूको पछि लागे उनीहरूले खोज्छन् र धेरै योग्य छन्। यो वास्तविक शूरवीरहरु, बलियो, तर निविदा हुन्छन्, आँखाको थोपा मिल्चोकिकलिक अभिव्यक्तिसँग महिलाहरूको हृदयमा लडाइँ र सानो पुरानो वेशभूषा। तिनीहरू जिम्मेवार छन्, र उनीहरूमा भरोसा गर्न सकिन्छ। यो क्रिएटिव रोचक इशाराहरु हो, जो उबाऊ छैन। क्यान्सरले परिवारलाई धेरै सराहना गर्छ र यसमा धेरै ध्यान दिन तयार छन्, तिनीहरू उत्कृष्ट बुबा हुन् जुन बच्चाहरु मन पराउँछन्। क्यान्सरले उत्कृष्ट सफलता प्राप्त गर्न चाहँदैनन्, तर उनीहरूको दृढता, दक्षता र निश्चित रूढिवादी कारणले उनी प्रायजसो सैनिकहरू हुन्छन्।
मानिसको क्यान्सरको साथ कसरी प्रेममा पतन हुन्छ
"आक्रमण" सुरु गर्नु अघि, ध्यानपूर्वक सोच्नुहोस्: तपाईं क्यान्सर जित्न सजिलो हुनेछैन, तर जब तपाईले यो प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो अविवाहित फिडेलिटीमा गणना गर्न सक्नुहुनेछ। के यो बोरिदैन? क्यान्सर एक अत्यन्तै विश्वसनीय सँगी साथी हुनेछ, तर तपाईलाई हराउनुको डरले उसलाई नेतृत्व गर्नेछ। यसैले, ईर्ष्या र स्वामित्वको उदार अर्थ सम्भव छ। एकै समयमा, हामी रैसी अत्याचार दृश्यहरू, व्यापक इशाराहरू र ज्वालामुखी जुनूनबाट आशा गर्नुपर्दैन। यो चिन्ह आफैमा सबै केहि अनुभव गर्न चाहन्छ।
यदि तपाईं "तूफान" निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तल सल्लाहले पुरुष क्यान्सरको साथ प्रेममा कसरी घट्नको जवाफको जवाफ दिनेछ।
तपाईंको स्त्री स्त्रीमा उपस्थिति र व्यवहारमा अधिकतम देखाउनुहोस्। लाइट, अपमानजनक, जीवित, सज्जन, उत्साह, तातोपन र राम्रोसँग तयार पारिएको, परिष्कृत र परिष्कृत भएको छ - यस्तो महिलाले उनको पहिलो ध्यान आकर्षित गर्नेछ। क्यान्सरहरू गेस्टहाउसहरू छन्, तिनीहरूसँग उत्कृष्ट स्वाद छन् - यदि तपाईं एक अप्रिय पोशाकमा निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो सुन्दरताको क्यान्सरको आधारमा निष्कासित छ। पुरुष क्यान्सर धेरै अमूल्य छन्। तपाईंले आफ्नो आत्मामा रोमान्टिक स्ट्रिङ अन्ड्रेन्ड गर्नु पर्छ। यसको अतिरिक्त, क्यान्सर, आफैमा एक कुरा हो, उनीहरूको विपरीत ध्यान दिनुहोस - फ्रान्क र खुला केटीहरू। यो तिनीहरूसँग हो कि तपाईं सक्रियतापूर्वक इज्जत गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो सुन्दरता र अनुग्रहमा हुनुपर्छ।
तपाईंको अर्को कार्य क्यान्सरको ध्यान राख्न। उसलाई आफैलाई नाइट साबित गर्न दिनुहोस्। संवेदनशीलता र सावधानी को बावजूद, उनि आफै को रक्षा गर्न मा सक्षम हुन्छन् र आफ्नो कवच को पूर्ण बल को आफ्नो चुने को एक को प्रदर्शन को लागि तैयार हो। तिनीहरू बुद्धिमानी, बुद्धिमानी तर लुगा लगाउँछन्।
म्यान-क्यान्सरको साथ प्रेममा कसरी पतन गर्ने भन्ने बारे सोच्नुहोस्, बङ्गला, रौलिए, छुटकाराको बारेमा बिर्सनु, कठोरता र खराब आचरणहरूको कुनै पनि अभिव्यक्तिहरू, शब्दहरुमा सावधान रहनुहोस् - क्यान्सर सजिलै जित्न सजिलो छ, भले यो यसलाई बाह्य देखिँदैन। क्यान्सर निरन्तर समर्थनको आवश्यकता छ, यसको साथ सौन्दर्य हुनुहोस्, धीरजीले तपाईंको बारेमा उच्च राय के बुझ्दछ। तर कहिल्यै झूटो नगर्नुहोस्। क्यान्सरहरूले उत्कृष्ट अन्तर्वार्ता पाएका छन्, उनीहरु राम्रो तरिकाले मानिसहरु मा आधारित छन्। उहाँले तुरुन्त अपमानितालाई ध्यान दिनुहुनेछ र धेरै निराश हुनेछ।
लिभिता को क्यान्सर कहिल्यै नदेखाउनुहोस्। उनको लागि, एक स्त्री निष्ठाको आदर्श हो। उहाँले आफ्नो छनौटमा दृढतापूर्वक शंका गर्नुहुनेछ यदि त्यो देख्छ कि महिलाले परिवारको मानहरूको उपचार गर्न सजिलो छ । क्यान्सर, यसको संवेदनशीलता र रोमान्स को बावजूद, तपाईंको प्रेमिका को लागि धेरै ध्यान दिनुहोस र एक लामो समय को लागी कि उनको एक हात र दिल को पेशकश को लायक छ कि सोच्न को लागि। क्यान्सरहरू घर, घरघर, बालबालिकाको प्रेममा धेरै सराहनात्मक छन् - तपाईले यो परिस्थितिलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाइँ यो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ अवसर छ भने, उनको आमा हेर्नुहोस्। पुरुष-क्यान्सरहरूले प्रायः उनीहरूका छनौटहरू छनौट गरेका छन। यसको साथ एक साधारण भाषा खोज गर्न निश्चित हुनुहोस्, जुन तपाइँले सफलतापूर्वक माथि दिइएका सल्लाहहरू लागू गर्न सजिलो हुनेछ। कुनै पनि आमाले खुला, आर्थिक, सज्जन, सेतो, विनम्र र प्यारा लुगा लगाउने केटी होस्ट गरिनेछ।
क्यान्सरबाट महान् उपहारहरू आशा नगर्ने र उनीहरूले कहिल्यै माग्न नसक्ने - उनी केटीको सबैभन्दा ठूलो पक्ष मान्छन्, र उनीहरूको चासोको भौतिकताले उसलाई डराउन सक्छ। उहाँ ठुलो होइन, तर मितव्ययी, सबै व्यावहारिक व्यक्तिहरूको रूपमा जस्तै छ।
यदि पुरुष क्यान्सरले पहिले नै तपाईलाई ध्यान दिनुभएको छ, र तपाईंले उहाँलाई मनपराउनुहुन्छ, ध्यान राख्नुहोस् कि छिटो उहाँलाई उत्कृष्ट छैन। त्यो केटीले चाँडै बिस्तारै जित्नेछ, सावधानीपूर्वक, प्रत्येक चरण प्रमाणित गर्दै, त्यसो भएन र यसलाई निराश नगर्नुहोस् र निराश हुन नदिनुहोस्, सोच्नुहोस् कि तपाईं केहि पनि कहिल्यै प्राप्त गर्नुहुने छैन। कहिलेकाहीँ एक महिलाले पहिलो चरण लिन आवश्यक छ वा कम से कम मानिसलाई रुकुमलाई देखाउँदछ कि उनीसँग डरलाग्दो कुरा छैन।
"पुरुष क्यान्सरको साथ प्रेममा कसरी पतन गर्ने" प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनुहोस्, भले ही तपाईं विवाहित हुनु भएको छ। क्यान्सर प्रेम संघको बारेमा धेरै छनौट छ र आदर्शको लागि पर्खिरहेको छ। उसलाई नबिर्सनुहोस् कि तपाईं आदर्श हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको लागि पर्खँदै हुनुहुन्छ। लगातार आफैलाई र तपाईंका कमजोरीहरूमा काम गर्दछ - र त्यसपछि तपाईंलाई सजावटको साथ प्रदान गरिनेछ, जुन तपाइँ कुनै अन्य मानिसबाट आशा गर्नुहुन्न।
मानिसको क्यान्सर कसरी बनाउने?
यो प्रश्न धेरै केटीहरु मा उठ्छ, किनकि क्यान्सरहरू साँच्चै छुट्याउने हुन्छन्, ती सबै भन्दा कम लापरवाह शब्द - र उसले आफ्नो शेलमा लुकेको छ। अनि कहिलेकाहीँ यो अनुमान लगाउन गाह्रो छ कि यसले उनीहरूलाई नराम्रो पार्छ, किनभने क्यान्सर फ्रिक्कैको लागी झुन्डिएको छैन। तर यसलाई यस्तो ठूलो समस्यामा नबिर्सनुहोस्। क्रेफिश प्रायः आफूलाई बुझ्दछन् कि तिनीहरू ट्राफिकहरूको बारेमा चिन्तित छन्, उनीहरूलाई उनीहरूको अपराध "पुन: कार्य" गर्न दिनुहोस्। सम्बन्ध पत्ता लगाउन शुरू नगर्नुहोस्, एकै समयमा क्यान्सर बेवास्ता गर्दैन। खुला र अपमानजनक हुनुहोस्। यदि तपाईं जान्दछन् "दोषी", प्यारी माफी माग्ने र यो विषय छोडेर आफ्नो मनपर्ने डिश तयार पार्नुहोस्। कुनै पनि समय, यसलाई सुन्न तयार हुनुहोस्, तर यो गर्नु पर्दछ कि यो गर्नु पर्छ। क्यान्सरले आफ्नै दुर्व्यवहारको सामना गर्न चाहन्छन्। यदि, तथापि, यो सम्बन्ध सम्बन्ध स्पष्टीकरणको बिन्दुमा पुगेको छ, कुनै पनि मामलाले मूर्खतालाई रोल गर्दछ। झलकहरू र हट दृश्यहरूलाई मात्र एक संवेदनशील क्यान्सर निराश पार्न सक्छ। तपाईंले के गर्ने प्रयास गर्नुभयो, प्रश्न "कसरी एक मानिस-क्यान्सरको साथ प्रेममा पतन गर्न": सहिष्णु, निविदा, संवेदनशील र बलियो, सामान्यमा - एक वास्तविक महिला।
कसरी राम्रो तरिकाले केटी गल्ती गर्दछ: निर्देशन र सुझावहरू
कसरी आकर्षक छ केटा
केटीले के सोच्छ, र कसरी यो व्यवहार गर्न सक्छ
सामान्य कम्प्यूटर तापमान
लियोनार्डो दा विंची द्वारा "Madonna र बाल"